လွမ်းမပြေ သုတရပ်ဝန်း: July 2013
ကမ္ဘာ့အသက်အကြီးဆုံး ပရော်ဖက်ရှင်နယ် သေနတ်ပစ်သမား အဖွားအို...
Wednesday, July 31, 2013 ထူးဆန်းထွေလာ
သူမကတော့ အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာနေထိုင်တဲ့ အသက် (၇၈)နှစ်အရွယ် Chandro Tomar ခေါ် အဖွားအိုပဲဖြစ်ပါတယ်... နိုင်ငံတ၀ှမ်း သေနတ်ပစ်ပြိုင်ပွဲတွေမှာ နေရှင်နယ်ချန်ပီယံဆုပေါင်း ၂၅ ဆု ဆွတ်ခူးခဲ့ပြီးပြီလို့ ဆိုပါတယ်...။
Wednesday, July 31, 2013 ဓါတ်ပုံ
Wednesday, July 31, 2013 မတော်တဆမှု
Tuesday, July 30, 2013 Android Firmware နှင့် Rooting ဆိုင်ရာ | Tips & Tricks
Samsung Galaxy Phone/Tablet တွေကို လွယ်လွယ်ကူကူ Root လုပ်နိုင်တဲ့ Root Apk လေးတစ်ခုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါမယ်.. တော်တော်များများ ဒီ Apk လေးကိုသိကြမှာပါ
Android Firmware နှင့် Rooting ဆိုင်ရာ, Tips & Tricks,
Tuesday, July 30, 2013 Tips & Tricks | နည်းပညာသတင်းနှင့် ဖတ်စရာများ
အင်တာနက် လိုင်းမကောင်းလို့ Facebook ပေါ် တက်မရဘူးလို့ ဆိုကြ ပါတယ်။ ရပါတယ်။ ဖြစ်အောင်လုပ်ရင်ရပါတယ်။ သို့ပေမယ့် အောက်ပါ လခ့်များကို အသုံးပြုဖုိ့တော့ လိုအပ်ပါတယ်။
Tips & Tricks, နည်းပညာသတင်းနှင့် ဖတ်စရာများ,
Tuesday, July 30, 2013 Anti-virus & Security | Tips & Tricks
SVCHOST.EXE က Flash Drive များမှတဆင့် မိမိကွန်ပျူတာဆီသို့အချိန် မရွေးရောက်နိုင်ပါတယ်..သူတိုက်ခိုက်ခြင်းခံရရင် Signature တွေအနေနဲ့ ဒီလိုပြလေ့ရှိပါတယ်..
Anti-virus & Security, Tips & Tricks,
Tuesday, July 30, 2013 အသက် (၁၈)နှစ်အထက် ဆေးစာများ
Leiomyoma နဲ့ Myoma လို့ပါခေါ်တယ်။ ကင်ဆာမဟုတ်တဲ့ သားအိမ်မှာ အလုံး-အကျိတ်ဖြစ်တယ်။ တလုံးတည်းရော အများကြီးပါ ဖြစ်နေနိုင်တယ်။ အရွယ်အစားလဲ သေးသေးလေးကနေ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေသလား အောက်မေ့ရလောက်အောင် ကြီးနိုင်တယ်။ အမျိုးသမီးတွေ အသက် ၅ဝ ကျော်လာရင် ၇ဝ-၈ဝ% ရှိကြတယ်။
Sunday, July 28, 2013 အနုပညာလက်ရာ
<img class="alignnone size-medium wp-image-85707" alt="Pictures From Revere Beach Sand Sculpting Festival 2013 (1)" src="http://oddstuffmagazine.com/wp-content/uploads/2013/07/c55d7dcf9fe3b3b93007f58984b651c3-610x342.jpg" width="610" height="342"/>
Sunday, July 28, 2013 ဓါတ်ပုံ | ဖတ်စရာ၊ မှတ်စရာ
ဓါတ်ပုံ, ဖတ်စရာ၊ မှတ်စရာ,
Sunday, July 28, 2013 ဓါတ်ပုံ
Being his ultimate support, ladder, toy and what ever else he needs.
Sunday, July 28, 2013 ထွေရာလေးပါး
Ashampoo Movie Studio 1.0.1.15 With Serial Key Free Download 2013
Thursday, July 25, 2013 Multimedia | Tips & Tricks
Making and editing home movies as it should be.Ashampoo Movie Studio includes everything you need to edit and produce your home movies fromstart to finish inastep-by-step fashion.
Multimedia, Tips & Tricks,
Wednesday, July 24, 2013 ကျန်းမာရေးနှင့် ဆေးပညာ
လူသားတွေရဲ့ ကျင်ငယ်ရည်နဲ့ မိုဘိုင်းဖုန်းတွေကို အားသွင်း ပေးနိုင်မယ် ဆိုပဲ...
Tuesday, July 23, 2013 နည်းပညာသတင်းနှင့် ဖတ်စရာများ
လုပ်ချလိုက်ပြန်ပြီ... လူတွေရဲ့ ကျင်ငယ်ရည်ကို အသုံးပြုပြီး ကမ္ဘာ့ ပထမဆုံး မိုဘိုင်းလ် ဖုန်းအား သွင်းနိုင်တဲ့ Battery Charger ကို ယူကေ သိပ္ပံပညာ ရှင်တွေက တီထွင် လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်...၊
ဓါတ်ခွဲ စမ်းသပ်မှုတွေ ပြုလုပ်တဲ့ University of West England က Dr. Ioannis Ieropoulos ကတော့... ကမ္ဘာပေါ်မှာ ဘယ်သူမှ မလုပ်နိုင် သေးတဲ့ ကျင်ငယ်ရည်ကနေ မိုဘိုင်းလ် ဖုန်းတွေကို အား သွင်းနိုင်တဲ့ Battery Charger ကို ဦးစွာ တီထွင် ဖန်တီးနိုင် တာဟာ သူ့အတွက် အတော်လေးကို စိတ် လှုပ်ရှားစေ တယ်လို့ ဆိုပါတယ်.. လူသားတွေရဲ့ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့ ကျင်ငယ်ရည်ကို အသုံးပြုပြီး အခုလို စွမ်းအင်အဖြစ် ပြောင်းလဲ ထုတ်လုပ်နိုင် တာဟာ ဂုဏ်ယူစရာပါ... တဲ့....။
အဆိုပါတက္ကသိုလ်က အခြားကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တစ်ဦးကလည်း... ဒီစွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ဖို့အတွက် လိုအပ်တဲ့ ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းတွေဟာ မိမိတို့လူသားတွေရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ကျင်ငယ်ရည်တွေသာ ဖြစ်တဲ့အတွက် မကုန်ခမ်းနိုင်ဘူးဆိုတာ သေချာတယ်လို့ ဆိုပါတယ်.... ၀မ်းသာစရာပဲ...း-)
ယခုလောလောဆယ် စမ်းသပ်မှုတွေအရ ကျင်ငယ်ရည်ကိုအသုံးပြုပြီး အားသွင်းထားတဲ့ မိုဘိုင်းလ် ဖုန်းတွေဟာ SMS.. Web Browser နဲ့ Brief Phone Call တွေ အတွက်လောက်တော့ လုံလောက်ပြီး... Fully Charge ဖြစ်ဖို့အတွက် ထပ်မံ ကြိုးစားဆောင်ရွက်သွားအုံးမယ်လို့ ဆိုပါတယ်... များမကြာခင် Mobile ဈေးကွက်မှာ စောင့်မျှော်အားပေးနိုင်ပါတယ်...
ဒီ Battery Charger လေးသာဆောင်ထားရင်... ခရီးသွားရင် မအောင့်နိုင်လို့ လူမရှောင်သူမရှောင် လမ်းဘေးမှာ ရှုးရှုးပေါက်ချသူတွေအတွက်တော့ အကြောင်းပြစရာ အချက်တစ်ခု ရလာပြီပေါ့ဗျာ.... "ဖုန်းအားကုန်သွားလို့ အားပြန်သွင်းနေတယ်...ပေါ့"း-)
ဂျပန်နိုင်ငံက ထူးဆန်းဆိုင်ကယ် စမ်းသပ်တီထွင်
ကြံကြံဖန်ဖန် တရုတ်နိုင်ငံက Virgin Boy Eggs
Monday, July 22, 2013 အနုပညာလက်ရာ
ကျောက်ကမ်းပါးစွန်းမှာ တွဲလောင်းဆွဲ တည်ဆောက်ထားတဲ့ တရုတ်နိုင်ငံရှိ စားသောက်ဆိုင်...
Monday, July 22, 2013 ထူးဆန်းထွေလာ
Monday, July 22, 2013 စက်မှုရေးရာ
Saturday, July 20, 2013 ထွေရာလေးပါး
Menstruation (1) မိန်းမပီသတာ စိုးရိမ်စရာမရှိပါ (၁) (18+)
Friday, July 19, 2013 အသက် (၁၈)နှစ်အထက် ဆေးစာများ
၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၁၉)ရက်နေ့မှာ ကျရောက်တဲ့ (၆၆)နှစ်မြောက် အာဇာနည်နေ့ကို ဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့်....
Thursday, July 18, 2013 ဖတ်စရာ၊ မှတ်စရာ | အနုပညာလက်ရာ
Design: Ko Myo
ဖတ်စရာ၊ မှတ်စရာ, အနုပညာလက်ရာ,
Menstruation (3) မိန်းမပီသတာ စိုးရိမ်စရာမရှိပါ (၃) (18+)
Wednesday, July 17, 2013 အသက် (၁၈)နှစ်အထက် ဆေးစာများ
Q 1: သမီးက အသက် ၂၃ နှစ်ပါ။ ရာသီလာတာ မမှန်ပါဘူး။ တခါတလေ ၂ လမှ တခါ လာပါတယ်။ အရင်ကတော့ အမေက သွေးဆေး အမြဲတိုက်ပါတယ်။ မြန်မာဆေးတွေ။ ခုက ဒီမှာ ဝယ်လို့လည်း မရပါဘူး။ ခု ဝက်ခြံတွေလည်း မျက်နှာမှာရော ကျောမှာပါ ပိုပေါက်လာပါတယ်။ သူငယ်ချင်းကပြောလို့ ချင်းပြုတ်ရည်လည်း သောက်ပါတယ်။ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာ ဖြေကြားပေးပါရှင်။
Wednesday, July 17, 2013 Android Firmware နှင့် Rooting ဆိုင်ရာ | Tips & Tricks
Wednesday, July 17, 2013 ထွေရာလေးပါး
Wednesday, July 17, 2013 Anti-virus & Security | Tips & Tricks
Fresh Daily Kaspersky Updated And Not Blocked Activation Key Files KAV+KIS
Android Games ကြိုက်သူများအတွက် 53 Top Paid Android Games Pack (16 July 2013) Free Download..
Wednesday, July 17, 2013 Android Apps & Games | Tips & Tricks
AirRace SkyBox v1.1.apk
Ancient Capital 1975 v1.0.apk
Angry Birds Space HD v1.5.2 (ONLY HD PHONES).apk
Animal Puzzle – Drag ‘n’ Drop v1.6.apk
ArcherCat v2.2.1 Mod (Free Shopping).apk
Android Apps & Games, Tips & Tricks,
Android ဖုန်းတွေအတွက် Top Paid Application and Themes Pack – 15 July 2013.....
Free download တွေပါ...
Tuesday, July 16, 2013 ဖတ်စရာ၊ မှတ်စရာ
မကြာမီ သီတင်းကျွတ်တော့မှာ ဖြစ်သလို ပုရိမ၀ါဆိုဝါကပ် ပြုတော်မူနေကြတဲ့ သံဃာတော်အရှင် မြတ်များရဲ့ ၀ါတွင်းကာလလည်း ကုန်ဆုံးတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သီတင်းကျွတ်ပြီးတဲ့နောက် မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ အတွက် ဘာသာရေးဆိုင်ရာ ကုသိုလ်ပွဲတစ်ခုအဖြစ် ကထိန်အလှူပွဲတွေက ထပ်ပြီးရောက်လာကြတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သီတင်းကျွတ် လပြည့်ကျော် (၁)ရက်နေ့ကစပြီး တန်ဆောင်မုန်း လပြည့်နေ့အထိ (၁)လတာ ကာလကို ကထိန်အလှူပွဲ ကျင်းပရာ ကာလအဖြစ်
Tuesday, July 16, 2013 Multimedia | Tips & Tricks
Induce Team အဖွဲ့က ဖန်တီးထားတဲ့ Adobe Patcher လေးတစ်ခုတွေ့လို့ ပြန်လည်မျှဝေလိုက်ပါတယ်... အတော်လေးကောင်းတယ် လို့ ပြောရမှာပဲဗျာ... Crack ဖိုင်လ်တွေကို copy ကူးပြီးတော့ program locations တွေမှာ သွားထည့်ရတာမျိုး စိတ်ရှုပ်မခံချင်ဘူးဆိုရင် ဒီ Patch လေးကို အသုံးပြုပြီး ကလစ်တချက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ full version ဖြစ်သွားအောင် လုပ်ပေးတယ်... CS4 ကနေပြီးတော့ အခုနောက်ပိုင်းထွက်တဲ့ CC အထိ adobe software တော်တော်များများကို full version ဖြစ်အောင် လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်...
Monday, July 15, 2013 ထူးဆန်းထွေလာ
အင်တာနေရှင်နယ် ချက်ဘုရင် Greg Shahade ကို အချိန် ၄ မိနစ်အတွင်းမှာ အနိုင်ကစားခဲ့တဲ့ Samuel Sevian ခေါ် ၁၀ နှစ်သားအရွယ် အမေရိကန်ကလေးငယ်......။
သတိထားရမဲ့ Samsung Galaxy S3 Smartphone ရဲ့ ဘက်ထရီ အန္တရာယ်....
Monday, July 15, 2013 နည်းပညာသတင်းနှင့် ဖတ်စရာများ | ဖတ်စရာ၊ မှတ်စရာ
Samsung Galaxy S3 အမျိုးအစား Smartphone ကို ဘောင်းဘီအိတ်ကပ်ထဲမှာ ထည့်ထားပြီး အလုပ်လုပ်နေရင်း သူ့အလိုလို ပေါက်ကွဲသွားတယ်လို့ Swsis လူမျိုး ဆယ်ကျော်သက်အမျိုးသမီး Fanny Schlatter က ဆိုပါတယ်... အခုလို Samsung ဘက်ထရီပေါက်ကွဲတဲ့ ပြဿနာဟာ
Monday, July 15, 2013 အနုပညာလက်ရာ
Monday, July 15, 2013 ထွေရာလေးပါး
Unlock Root Pro v4.10 full with Serial (No fake, Really work)
Sunday, July 14, 2013 Android Apps & Games | Tips & Tricks
Unlock Root Pro v4.10 | 38.0 MB
Unlock Root Pro v4.1 isasoftware to help you root your Android device. The main function of this software is to obtain the highest user privileges, thus you can remove, install or uninstall any applications on your device freely and give youaclean system since you use Unlock Root. It has powerful functions and strong compatibility, and also it is
Thursday, July 11, 2013 အနုပညာလက်ရာ
Menstruation (2) မိန်းမပီသတာ စိုးရိမ်စရာမရှိပါ (၂) (18+)
Wednesday, July 10, 2013 အသက် (၁၈)နှစ်အထက် ဆေးစာများ
Q 1: ကျွန်မမှာလဲ ရာသီမမှန်တဲ့ ပြဿနာ ရှိပါတယ်။ ရာသီစလာတဲ့ အရွယ်ကတည်းက ခုထိမမှန်တာပါ။ အခုအသက်က ၂ဝ ပါ။ အရင်တုန်းက အတော်လေး ပိန်ပါတယ်။ ခုနောက်ပိုင်းတော့ ဝချင်လို့ အစားတွေစား လေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်နဲ့ ဝလာတယ်။ သွေးအားကတော့ နည်းပါတယ်။ ပုံမှန် ၉ဝ-၆ဝ ပဲရှိပါတယ်။ Folic acid ပါတဲ့ Vifron အားဆေးလဲ သောက်ပါတယ်။ ရာသီ မမှန်တာကတော့ တခါတလေ ၃ လလောက်အထိ ကြာတတ်ပါတယ်။ အာရှတော်ဝင်မှာ တစ်ခါ သွားပြပါတယ်။ OG က ဓါတ်မှန်တွေ ရိုက်ခိုင်းပါတယ်။ သွေးလဲစစ်ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ စစ်ဆေးတာ ဆွေးနွေးတာ အချိန်
Wednesday, July 10, 2013 ထူးဆန်းထွေလာ
တူရကီနိုင်ငံက အသက် (၄၂)နှစ်အရွယ် အမျိုးသားရဲ့ ဆေးလိပ်ဖြတ်တဲ့နည်းတခုပါ... နံက်အိပ်ယာထချိန်နဲ့... ဆေးလိပ်သောက်ချင်တဲ့အချိန်တွေမှာ ဆေးလိပ်မသောက်ဖြစ်အောင် ဇနီးဖြစ်သူက သူ့ရဲ့ခေါင်းကို လှောင်အိမ်နဲ့ စွပ်ပြီး သော့ခတ်ပေးထားရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်... အံ့ဖွယ်ဆေးလိပ်ဖြတ်နည်းတစ်ခုပါပဲး-)....။
Monday, July 08, 2013 နည်းပညာသတင်းနှင့် ဖတ်စရာများ
အင်တာနက်လုံခြုံရေးအတွက် မဟာတံတိုင်းကြီး FortKnox Personal Firewall
Monday, July 08, 2013 iOS Devices ဆိုင်ရာ | နည်းပညာသတင်းနှင့် ဖတ်စရာများ
Firewall ဆိုတာ နားလည်လွယ်အောင်
ဂိတ်ပေါက်တစ်ခု (တံတိုင်း တစ်ခု )လို့
နေမှာဖြစ်ပြီး ဂိတ်ပေါက်ကို စနစ်တကျနဲ့
လက်ခံဝင်ထွက်ခွင့် ပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် ..
Firewall ကို နိုင်နိုင်နင်းနင်းမကိုင်တွယ်ထားနိုင်တဲ့
ကွန်ပျူတာတစ်လုံးဟာ အင်တာနက်ဆက်ကြောင်းထဲမှာရှိနေတဲ့ Malware, Addware, Spyware နဲ့ ဗိုင်းရပ်ပရိုဂရမ်တွေ အလွယ်တကူ ၀င်ရောက်လာနိုင်ရုံသာမကပါဘူး ကိုယ့်ရဲ့ လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်တွေကိုတောင် ဟက်ကာတွေဆီ အလွယ်တကူ ရောက်ရှိသွားတတ်ပါသေးတယ် ..
ဥပမာဗျာ .. ကျွန်တော်က ဆော့ဝဲတစ်ခုကို Install လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့
အဲဒီ ဆော့ဝဲထဲမှာ keylogger လို ဆော့ဝဲတစ်မျိုးကို Injection လုပ်ထားမယ်ဆိုပါစို့
ကျွန်တော့်ရဲ့စက်ကို အင်တာနက်ချိတ်ဆက်လိုက်တာနဲ့ အဲဒီ keylogger က ကျွန်တော် ကီးဘုဒ်မှာရိုက်ထည့်လိုက်သမျှကို မှတ်တမ်းတင်ပြီး အဲဒီအချက်အလက်တွေကို အဲဒီ keylogger ကိုပို့လွှတ်ခဲ့သူဆီရောက်အောင် ပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးပါလိမ့်မယ်
ဒါကတော့ အနောက်နိုင်ငံတွေမှာ ခေတ်စားလာတာကြာခဲ့ပြီ ဒီရက်ပိုင်းအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံက ဟက်ကာတွေကြားမှာ အသုံးများလာတဲ့ ဟက်ကင်းနည်းလမ်းလေးတစ်ခုပေါ့ ...
ဒါဆိုရင် .. အဲဒီလို ကျွန်တော်ရဲ့အချက်အလက်တွေကို ဟက်ကာဆီပြန်ပို့ပေးမယ့် ၀င်ပေါက်ထွက်ပေါက်ကို သိရှိပြီး အချိန်မှီ ပိတ်ဆို့ကာကွယ်ထားနိုင်မယ်ဆိုရင်
နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေ မခံရတော့ဘူးပေါ့ ..
အဲဒီလို ဆိုးကျိုးတွေပေးမယ့် ၀င်ပေါက်ထွက်ပေါက်တွေကို ဘယ်လို စောင့်ကြည့်ပြီး သိရှိနိုင်မလဲ ..
ဟုတ်ကဲ့ .. ၀င်းဒိုးပိုင်းနိုင်နင်းတဲ့ Pro သမားတွေကတော့ ၀င်းဒိုးထဲက Firewall မှာပဲ ပိတ်ဆို့ကာကွယ်တာတွေကို အလွယ်တကူ လုပ်ထားနိုင်ပေမယ့် .. ကျွန်တော်တို့လို သာမာန်အသုံးပြုနေသူတွေအတွက်တော့ Firewall ဆော့ဝဲလေးတစ်ခုခုကို အသုံးပြုမှ အဆင်ပြေနိုင်မှာပါ ..
ဒါကြောင့် .. အမှန်တကယ်လည်း အလုပ်ဖြစ် ထိထိရောက်ရောက်လည်း ကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ Firewall ဆော့ဝဲလေးတစ်ခု မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ် ..
ဆော့ဝဲရဲ့နံမည်က FortKnox Personal Firewall ဖြစ်ပါတယ် ..
ဒေါင်းပြီးပြီဆိုရင် setup ဖိုင်ကို Run ပြီး Install လုပ်လိုက်ပါ ..
Install လုပ်ရင် အင်တာနက်ကွန်နက်ရှင်ကို အရင်ပိတ်လိုက်ပါ
ပြီးရင် ပရိုဂရမ်ကို Run လိုက်ပါ
အဲဒီထဲက buy ဆိုတာကို နှိပ်ပေးလိုက်ရင် အောက်ကပုံအတိုင်းပွင့်လာပါမယ်
အဲဒီထဲက Enter serial ကိုနှိပ်လိုက်ပါ ..
နောက်ထပ်ပွင့်လာတဲ့ထဲမှာ ထည့်ရမယ့် အချက်အလက်တွေကိုတော့ keygen ဖိုင်ကို Run ပြီး
ကူးယူဖြည့်သွင်းပါ serial ကိုထည့်တဲ့နေရာမှာတော့ တစ်ဖြတ်ချင်းကူးယူပြီး Paste လုပ်မှအဆင်ပြေမှာပါ
ဒါဆိုရင်တော့ .. Full Version အဖြစ် သုံးလို့ရသွားပါပြီ
အင်တာနက်ချိတ်ဆက်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ အင်တာနက်ဆက်ကြောင်းဆီကို သွားရောက်ချိတ်ဆက်တဲ့
ပရိုဂရမ်တွေနဲ့ သူချိတ်ဆက်နေတဲ့ ၀က်ဆိုဒ်တွေကို Message ပေးလာပါလိမ့်မယ် ..
အဲဒီထဲကမှ စိတ်ချရတဲ့ ၀က်ဆိုဒ်မျိးကို ချိတ်ဆက်နေတာဆိုရင် Allow ကို နှိပ်ပြီးခွင့်ပြုပေးနိုင်ပြီး
မသင်္ကာစရာကောင်းတဲ့နေရာတစ်ခုဆီကို ချိတ်ဆက်နေတာမျိုးဆိုရင်တော့ Not Allow ကိုနှိပ်ပြီး
သူ့ရဲ့လမ်းကြောင်းကို ပိတ်ဆို့ထားလိုက်ရုံပါပဲ ...